Buurtinle waa magaalo ay degenyihiin dad badan oo soomaaliyed. Waana dagmo ku taal Gobolka Nugaal waxa ayna u dhaxaysaa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garowe.Waxaana degmada mara laami.Waa magaalo qadiimi ah, dagaaladii sokeeye ee ka qarxay dalka Soomaaliya way ka badbaaday. Waxaa ku nool Burtinle dad gaaraya ilaa 139,000 oo qof. Guud ahaan waxaa daga qabaa'ilo kala duwan oo ay kamid yihiin beelwaynta Awrtable'' kana dhasheen dad badan oo masuliyin ah sida Cabdiaziz Nur Hirsi waxaa uu kamid ahaa rug-cadayaashii siyaasada Somaliyeed. 1964 waxaa uu kamid noqday Xildhibaanadii Qaranka, Sidoo kale waxaa uu shaqooyin kala duwan kasoo qabaty dawladii Militariga ahayd ee AUN Madaxwaybe Mohamed Siyad bare. Sidoo kale waxaa lagu xasuustaa dhimihii maamul gobaleed Puntland oo da khaas ah isagu uga shaqeeyey dhinaca sharci jadinta Maamulkaas iyo Ugas Cumar geelle maxamed kaneec kana mid aha isimidadi asasay puntland state of Somalia xiligu marku ahaa 1998 aabihiisna wuxuu aha udub dhigihii ugu horeeyey ee dega Buirtinle Ugaas Geelle maxamed kaneec AUN waxa uuna geeriyoday taariikhdu markay ahayd 1983 sido kale waxa kadhashay Awrtable'' gabyagi caanka ka ahaa oo laga wada yaqaan dhaman gayiga somaliyed Careys ciise kaaeshe, waxay kalo isla dagaan majeerteen ee Cumar Maxamuud, gaar ahaan reer xirsi reer aadan Cigalle, reer Mahad, waxa kalo dega beelwaynta madhibaan Buurtinle waxay laf dhabar u tahay reer guuraaga dega deegaankaasi. waxaana ku yaal ceelal waawayn oo xooluhu ka cabaan.
Degmada ayaa ah mid soo koreesa, horumarna laga dareemayo xaga aqoonta , dhaqaalaha iyo arimaha bulshada intaba. Ayadoo ay kuyaalaan dhammaan heerarka kala duwan ee dugsiyada waxbarashada kuwaasoo gaarsiisan ilaa heer dugsi sare. dagmada waxa ay leedahay dhaqaale farabadan sababtuna waa deganada hoos yimada waana magaalo aad uwayn dadku waxay moodaan markay dhexmarayaan magaalo yar runtii dhanka laamigu kamaro kama wayna magaaladu waxay uwayntahay qorax udhaca
burtinle waxay ka kooban tahay 7 xaafadood oo kala ah : 1- Tinka dheer waa xaafadii loogu magac daray magaalada buur tin leh. 2- kaantaroolka 3- booray 4- tuulo ciise 5- xaafatul carab 6- buur karoole 7- godqol wayne iyo dhanka hoose ee magaalada oo aan magac xaafadeed lagu tilmaamin .
burtinle waxaa ku yaal laba dugsi oo sare oo ku kala baxa afka carabiga iyo englsihka dugsiga sare ee almumtada islaamic oo ah sugsigii ugu horeeyay ee sare oo laga hir galiyo magaalada burtinle . iyo dugsiga sare ee secondory burtinle waxaa ku yaal dugsiyaal hooseedyo badan sida dugsiga hoose dhexe ee Dawladda oo ah dugsigii hoose dhexe ee magaalada ugu horeeyay . sidoo kale dugsiga hose dhexe ee imaamu shaafici oo ku xiran macadka al mumtada .
magaalada qabaail ahaan waxaa daga beelaha daarood gaar ahaan . Awrtable asasihi buurtinle Ugas Geelle maxamed Kanec iyo khaliif xaaji Majeerteen iyago kakala degey labada dhinac wadadi gacan kusamayska ahayd oo la isticmali jiray kahor lamiga beesha cumar maxamuud : oo uu ka dhashay kor: c/lahi yusuf axmed c/rasaaq xaaji xuseen c/wali aadan gaas islaan bashiir islaan cabdule islaan faarax , iyo kornaylo kale oo badan oo aanan meeshaan ku soo koobi karin . beel waynta owrtable oo ah beel caan ah oo aqoon yahano badan leh . waxaana ka dhashay aqoon yahankii maamulaha ka ahaa machadka almuntada alle ha u axariistee axmed ducale, Maxamed Cabdi Yusuf, Dhagaxtuur, Gelle Maxamed Kaneec, Xaaji Diiriye (oo ahaa duqii ugu horeeyey ee Maalkiisa la garab istaagey SYL, ahaa duqii ugu horeeyey ee Dabaqii ugu horeeyey Xamar ka dhisay) iyo Xaaji Yuusuf oo ahaa Caalimkii diinta Islaamka iyo Sayniska ee Bariga Afrika qarnigii 20 naad.
sidoo kale waxaa daga magaalada burtinle beesha madhibaan oo ayana ah beesha sedexaad marka laga reebo cumar maxamud iyo awrtable .
burtinle waxay gobol ahaan raacsan tahay gobolka Nugaal . lkn dhaqaale ahaan waxay ku xiran tahay gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo .
waxaa mara magaalada burtinle tog wayn oo loogu magac daray togga tima waynta .waxa uuna siimara tuulada gosal oo burtinle dhanka koonfur ka ga aadan ilaa uu ku biyo shubo mudugta dhexe (caduun) ila iyo bada hindiya
magaalada burtinle waa magaalo somali oo idili wada dagto marka laga reebo cidda deegaan ahaan u leh . waxayna ku nool yihiin si xuriyad ah aan hayb takoor lahayn .
buurtine waxay assaasantay kahor dhismaha laamiga ah oo isku xira bosaso iyo xamar waxana asaasay laba nin oo lakala yiraahdo Ugaas Geelle maxamed kaneeco awrtable iyo Khalif xaaji Omar Mahmoud iyago oo kala degay labada dhinac wadadi gacan kusamayska ahayd xiligaas
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Burtinle&oldid=203534"
Last edited on 15 Luuliyo 2020, at 15:37
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Luuliyo 2020, marka ee eheed 15:37.